shyam karki::Leading News Portal From Nepal.
२ मंसिर, काठमाडौँ । कात्ययानी चोक, मध्यवानेश्वरमा रहेको पिस प्वाइन्ट बोर्डिङ्ग स्कूलको आयोजनामा चौथो चौथो ३६१ डिग्री पिस प्वाइन्ट कप अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । ज्ञानेश्वरमा रहेको सानो गौचरण फुटबल मैदानमा मंसिर १ गते...
फेरियो मोटरसाइकल चोर्ने तरिकाः चोरी काठमाडौँमा, किनबेच चितवनमा
मोटरसाइकल चोरले अहिले चोर्ने शैली फेरेको पाइएको छ । महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त पन्तका अनुसार अहिले चोरले नयाँ मोटरसाइकल चोर्ने र त्यसको पार्टपुर्जा मात्र बेच्न थालेका छन् । ‘काठमाडौँमा चोरी भएको मोटरसाइकलको खोजी गर्न टोली...
‘एभरेष्ट वल्र्ड क्रिकेट प्रिमियम लिग’को घोषणा (भिडियो)
काठमाण्डौ । सिनामंगल गैह्रिगाउँमा रहेका एभरेष्ट वल्र्ड स्कूलको आयोजनामा ‘एभरेष्ट वल्र्ड क्रिकेट लिग’ र ‘एभरेष्ट वल्र्ड स्टार’को घोषणा गरिएको छ । शनिबार स्कूलको प्रांगणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त घोषणा गरिएको हो । सामाजिक अभियान्ता एवं...
नेसनल प्याब्सन काठमाडौँको ‘जिल्लास्तरिय क्विज कन्टेस्ट’ जेठ ३० देखि हुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) काठमाडौँको आयोजनामा यस वर्षको ‘जिल्लास्तरिय अन्तरविद्यालय क्विज कन्टेस्ट’ जेठ ३० गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । २ दिनसम्म चल्ने उक्त क्विज कन्टेस्ट चाबहिलमा रहेको...
प्याब्सकको अन्तरविद्यालय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न, पायोनियरकी स्मारिकालाई उपाधि (फोटोफिचर)
१६ जेठ, काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन काठमाडौँ (प्याब्सक) को आयोजनामा अन्तरविद्यालय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । बुधबार चबहिलमा रहेको भि.एस. कलेजको हलमा आयोजना गरिएको उक्त वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा १८ विद्यालयबाट २९ प्रतियोगीहरुको सहभागिता...